Ihe omuma ihe omuma Olee ihe omuma i choro iji weputa ihe ntanetiri Web
Ọ bụrụ na ị na-achọ data iji mee ka azụmahịa gị n'ịntanetị, ọ nwere ike ọ gaghị ekwe omume gị ịnakọta data nanị na-achọ Google. Mgbe ụfọdụ, anyị ga-eji ụfọdụ ndị na-awagharị weebụ na ndị na-enyocha data iji nweta ọrụ anyị, mgbe ụfọdụ, anyị ga-azụlite nkà ndị bụ isi. Ọ bụ eziokwu na engines ọchụchọ nwere ike inyere gị aka ịchọta ihe ị na-achọ, ma ịkwesịrị ịzụlite nkà ndị a iji mee nke ọma.
1. Ikike ịgụ faịlụ robots.txt
Ị ga-enwe ike ịgụ ma dezie faịlụ robots - unmetered bandwidth windows vps free.txt n'ụzọ kwesịrị ekwesị. A na-eji faịlụ a egbochi ndị crawlers ka ị na-akụ na saịtị gị ugboro ugboro. N'otu oge ahụ, ọ na-enyere gị aka ịnọgide na-enwe njirimara nke data gị na-ehichapụ ma mezie ọsọ nke ebe nrụọrụ weebụ gị maka ndị ọbịa. Ọ bụ ya mere ị ga-eji mụta otú e si dezie faịlụ robots.txt. Mgbe ị dezie faịlụ a n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ị ga-enwe ike iwepụ bọọlụ ọjọọ ndị na-adịghị agbaso iwu na ụkpụrụ nke engines ọchụchọ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịchọta ibe weebụ dị iche n'otu oge ma nwee ike iwepu ma ọ bụ wepụ data chọrọ.
2..Wụlite ihe nnweta data
Ọ dị ezigbo mkpa ịtọpụta ihe nnweta data ahụ ka ọ ga-ekpughe data dị mma site na ebe nrụọrụ weebụ niile. Dị ka ọmụmaatụ, ị ga-amụta SQL, PHP, na asụsụ ndị ọzọ dịka ha na-enyere aka ịnọgide na-enwe ihe nnweta nke data gị n'ụzọ ka mma. Ịnye ohere SQL na ịmepụta ihe nnweta data ga-enyere gị aka ịghọ onye nyocha nke onwe-gi, na-eme ka ị nweta data ziri ezi na nke ọma na nkeji ole na ole.
4. Ikike ide na ịbaa bọtịnụ
I kwesiri ịkọwa ezigbo bọọlụ na ezigbo bots. Ezigbo bọọlụ na-enyere gị aka ịdọrọ ebe nrụọrụ weebụ gị na nsonaazụ ọchụchọ, na-enye gị ọkwa nke ọma na nnukwu data. N'aka nke ọzọ, bọọ ọjọọ ndị ahụ na-emerụ gị na saịtị gị ma ọ gaghị enweta gị data nke ọma. Ọ bụghị nanị na ị ghaghị ịiche ọdịiche dị mma ma ọ bụ ezigbo bọtịnụ ma na ị ga-ede ma debe bots. I kwesiri ibu n'uche na bọọlụ bụ nzọụkwụ na-esote na mmalite nke kọmputa na mmekọrịta ụmụ mmadụ. Ọ pụtara na ịmatakwu banyere bọọlụ ma dee ha mgbe niile, ọ ga-abụ ohere ị ga-enwe iji wepụ data dị mma ma jiri ọrụ gị mee ihe.